४२ हजार युवालाई स्वरोजगार तालिम, Latest breaking news and updates on latest top stories, Video News, national, international, NRN, Gulf News, politics, sports, business, finance, entertainment, photo-gallery and more. Nepali News from Nepal and All over the Countries.
काठमाडौं। सरकारले सात प्रदेशका ४२ हजार युवालाई छोटो अवधीको शिप विकास तालिम दिने भएको छ । शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयको सहयोगमा व्यावसायीक शिक्षा तथा तालिम परिषद (सिटिइभीटी)ले उक्त तालिम संचालन गर्न लागेको हो।
छोटो अवधीको तालिममा सातै प्रदेशमा ६–६ हजार युवालाई सहभागी गराइने भएको छ तालिम संचालन गर्न मन्त्रालयले सिटिइभीटीलाई ७५ करोड रुपिया उपलब्ध गराएको छ।
तालिम असोज महिनाबाट संचालन हुने भएको छ । तालिम ३ महिनासम्म संचालन हुने सिटिइभीटीका योजना महाशाखा प्रमुख एवं निर्देशक रमेश वखतीले जानकारी दिए।
विषेश गरी स्थानीय तहमा वेरोजगार युवालाई स्वरोजगार हुने अवसर दिन र रोजगारीको लागि विदेश जाने युवालाई केही सहज बनाउन तालिम संचालन गर्न लागिएको हो।
स्थानीय निकायको सहयोगमा तालिमको विषय र प्रशिक्षार्थी छनौट गरिने भएको छ । प्रदेश र स्थानीय सरकारको प्रत्यक्ष सहभागितामा तालिम संचालन गर्न लागिएको निर्देशक बखतीले दावी गरे।
उनका अनुसार तालिम लिन सामान्य लेखपढ गरेकालाई समेत अवसर दिइने भएको छ । सिटिइभीटीका ३४ र प्राविधिक शिक्षा कार्यक्रम संचालन भएका करिब २ सय गरी २ सय ३४ विद्यालयमा सो तालिम संचालन गरिने भएको छ।
३ सय ९० घण्टा अवधीको सो तालिम सिकेपछि सहभागीले समुदायमा तालिमको उपलब्धी उपभोग गर्न पाउने छन।
निर्देशक वखतीका अनुसार सहभागीलाई सिकर्मी, डकर्मी, सिलाई कटाइ, वेल्डर, मेन्टिनेन्स, वाली विज्ञान, भेटेरिनरी, कुकिङ, वेकिङ लगायत दुई दर्जन भन्दा बढी विषयमा तालिम उपलब्ध गराइने भएको छ।
हामीले प्रशिक्षार्थीलाई दैनिक ५० रुपिया खाजाको व्यवस्था गरेका छौ, सहभागिता बढाउन खाजाको व्यवस्था गरेका हौं–निर्देशक बखतीले भने।
एक प्रदेशमा ५ हजार युवालाई तालिम उपलब्ध गराउदा उनीहरुले स्वरोजगारको अवसर पाउने भएपछि सरकारले नयाँ योजना अघि बढाएको हो । सो योजना अन्तर्गत ४२ हजार युवाले रोजगारीको अवसर पाउनेछन् । सरकारले प्रदेश सरकारलाई बलियो बनाउने र त्यहा उत्पादन भएका युवालाई आफ्नै प्रदेशमा रोगजारीको व्यवस्था गर्न तालिम संचालन गर्न लागेको बताएको छ।
तीन महिना तालिम सम्पन्न गरेका युवालाई उनीहरुको तालिम परीक्षण गर्ने योजना रहेको सिटिइभीटीले जनाएको छ । युवा पिढीलाई प्राविधिक शिक्षा तर्फ आकर्षित गर्न र आफ्नै क्षेत्रमा रोजगारीको अवसर प्रदान गर्न सिटिइभीटीले प्रदेश तहमा पहिलो पटक यस्तो तालिम संचालन गरेको हो।
तालिम संचालन गर्ने अधिकार प्रदेश सरकारलाई नै दिने योजना बनाएको छ । निर्देशक वखतीले तालिम संचालन गर्न कार्ययोजना तयार भैरहेको बताउनुभयो । एक समुहमा २० जना प्रशिक्षार्थी हुन्छन, उनीहरुलाई तालिम दिन आवश्यक पर्ने प्रशिक्षक प्रदेश सरकारले समेत खोज्न सक्नेछन् । सिटिइभीटीले आफ्ना प्रदेश कार्यालय मार्फत प्रदेश सरकारसंग समन्वय गरी तालिम संचालन गर्ने तयारी गरेको छ। नेपाल समाचारपत्र